Soojeedin Baaq Ku Wajahan Dib U Heshiisiinta Soomaaliyeed
Ujeedo: Soojeedin Baaq Ku Wajahan Dib U Heshiisiinta Soomaaliyeed
Waxaan usoo jeedinayaa waxgaradka Soomaaliyeed ee ku howlan dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed.
Inaan la goyn/engajin ilaha taageero & dhiiri galin ee habsame u socodka nabaddoonka Soomaaliya. “
In wixii aan Soomaalinimo ku qabsan wayno lagu canbaarayn laguna ceebayn dad kale. Waliba dadka jecel heshiiska iyo horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxaan qormadan ku soo bandhigayaa waxqabadkii & walaalnimadii uu Madaxwayne Cismaaciil Cumar Geele u muujiyey ummada Soomaaliyeed. Marka laga reebo inuu horaan talooyin wax ku ool ah u soo jeediyey ragii isku hayey awooda wadan, wuxuu mudane Cismaaciil Cumar Geele 1999 Golaha Amaanka ka jeediyey qudbad tariiq noqotey oo geesinimo iyo jeceyl badani ku larnaa.
Madaxweyne Cismaciil wuxuu golaha ka codsadey in lagu kaalmeeyo in dib u heshiin dhab ah uu u sameeyey ummada Soomaaliyeed ee colaadu ragaadsatey. Mudane Geele wuxuu ogaa awooda dhaqaale ee dowlada Djibouti ineysan aheyn mid xamili karta dib u heshiisiin baahsan oo uu u qabto Soomaali. Balse kalsooni uu ka qabo ummadiisa iyo jeceylka walaaltooyo ee uu u hayo ummada Soomaaliyeed ayuu ku dhiiraday taabagalinta shirkaas dib u heshiineed.
Shacablka Djibouti ayaa la qaatey madaxweyn Cismaciil in degmo & tuulo kasta lagu qoro dhaqaale. Dadaaladaas ayaa suuro galiyey in sanadkii 2000 uu madaxweyn Cismaciil dhigo gogol nabadeed magaalada Carta oo la isugu keeney dad gaaraya ilaa sadex kun. Wada hadalka nabada & gogasha ayaa qaatey todobo bilood. Waxa qarash ku baxay isu keenka & waliba marti galinta ergooyinkii halkaa isugu yimi, hadiiba aan la arag wanaaga & jeceylka qof walooba idugu qiyaaso.
Sidaas oo kale, wuxuu madaxweyne Geele taageerey dhameystirka dib u heshiisiinta ummada Soomaaliyeed ka dib markii uu ku kaalmeeyey iney dowlad dhistaan. Wuxuu is hortaagey wax kasta oo lagu lugoonaayey ama shirqooleyey ummada & dalka Soomaaliya. Ilaa xiligan, madaxweyne Geele, shacabka reer Jabuuti, iyo dowladuba u taagan yahay did u soo nooleynta qarankii & heybadii Soomaaliya.
Anigoo sameyneyn faro fiiq, waxaa quman in aynaan eedeyn, canbaareyn ama aynaan niyad jabin shaqsi & shacab wanaag & jeceylka ay u haya ummada iyo dalka Soomaaliya tariiqdana ku cad iyo geedi socodka nabada ay hor kacayaan.
Waxaan leeyahay madaxweyne Cismaciil Cumar Geele & Shacabka reer Djiboutiba wey mahadsanyihiin, ummada Soomaaliyeedna way qireysaa walaalnimadiina iyo waxtarkiina intaba.
Waxaan noo wada rajeynayaa in Alle wanaaga ama samaha na wada tuso.
Ugaas Abdullahi Ugaas Faarah
Gudoomiyaha Golaha Salaadiinta Soomaaliyeed